महाधिवेशनको मिति तोक्न र एकता... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
महाधिवेशनको मिति तोक्न र एकता प्रक्रिया टुंग्याउन माग गर्छौं सरकारको कामको पनि समीक्षा गर्न माग
सन्जिब बगाले काठमाडौं,माघ १२
बायाँबाट क्रमश: बिशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार र ठाकुर गैरे।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक माघ १५ देखि सुरू हुँदैछ।
झण्डै दुई वर्षपछि बस्न लागेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकका लागि उठाउने विषयवस्तुको पनि तयारी गरिरहेका छन्।
पार्टीको विधान अनुसार ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने हो तर झण्डै दुई वर्षसम्म बैठक बस्न सकेन। लामो समयपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेकोमा समेत उनीहरू उत्साहित छन्।
केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद विशाल भट्टराईले पार्टीको महाधिवशेन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने विषयलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताए।
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो।
'पार्टी एकताले गर्दा हाम्रा कमिटी ठूला र भद्दा भएका छन्। जसले गर्दा नियमित बैठक समेत हुन सकेका छैनन् भने पार्टीको गतिविधि पनि चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन,’भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने,‘पार्टीलाई गति दिनका लागि महाधिवेशन चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेतृत्वको ध्यान दिन जरुरी छ।'
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको तीन तहको सरकारको झण्डै आधा अवधि सकिएको छ। अब हामीले मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘पार्टी र सरकारको नेतृत्वको बीचमा समीक्षा हुनुपर्छ। हामीलाई जनताले विश्वास गरेर पठाएका छन्। जनताको विश्वासलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्नका लागि पनि हामीले नेतृत्व गरेका सरकारहरूको वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ,टालटुले समीक्षाले पुग्दैन।'
अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने? भन्ने विषय पहिलो एजेण्डा बन्ने बताए।
पार्टीको अहिलेसम्मको गतिविधिले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियोभन्दा पनि कमजोर भइरहेको उनको तर्क छ।
'सामूहिक हितले पार्टी सञ्चालन हुन सकेको छैन। हाम्रो पार्टी विचारप्रदान पार्टी हो तर सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष कमजोर भएको छ। यसले हाम्रो उद्धेश्य र पुग्ने बाटो कमजोर हुन्छ’, गैरेले भने,‘हामी समाजवादमा जाने भनेका छौं। यो लक्ष्य पूरा गर्न आधार तयार गर्नुपर्छ। हामीले भनेको समाजवाद के हो यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।'
‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी रहेको उनले बताए।
यसका लागि दलाल पुँजीवादलई पराजित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पार्टीले भनेको समाजवाद उन्मुख जनवादलाई समेत संश्लेषण गर्न आफूले बैठकमा माग गर्ने उनले बताए।
'पार्टी महाधिवेशन कहिले हुन्छ? महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल हटाउनुपर्छ,'गैरेले भने,'एकीकरणको बाँकी कामलाई पूरा गर्नपर्छ। त्यस्तै, पार्टी सदस्यता नविकरण गर्नेदेखि नयाँ सदस्यता थप्नेसम्मका काम पनि बाँकी नै छन्।'
सरकारको समीक्षा र पार्टी कामको समीक्षा गरेर के कमी भए आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयलाई केन्द्रीय कमिटीमा बहस गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
'देशमा अपारदर्शिता भ्रष्टाचार कमिसनकारी प्रवृत्ति हावी भएको प्रश्न उठेको छ। सुशासन र पारदर्शितामा अगाडि बढ्नुपर्छ,’उनले भने,‘राष्ट्रिय राजनीतिको समीक्षा,पार्टीको आन्तरिक जीवनको समीक्षा सरकारको समीक्षा र आजको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। हामीले तय गरेको कार्यक्रम, हामीले लिएको दिशा र हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा हाम्रो पार्टी परिचालन गर्नुपर्छ।'
अर्का केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद यज्ञराज सुनुवारले पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन भइरहेको ढिलाइलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताए।
'पार्टी एकता प्रक्रिया ढिलो भएको छ। पार्टी एकतामा भएको ढिलाइले कार्यकर्तामा समेत निराशा छाएको छ,' सुनुवारले भने,‘पार्टी एकतालाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउने काम कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउनभन्दा पनि ढिला भएको छ।'
राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी प्रष्ट हुन जरुरी रहेको भन्दै सुनुवारले निर्वाचनमा जारी भएको घोषणापत्र अनुसार काम भए नभएको मूल्यांकन हुन जरुरी रहेको बताए।
अहिलेसम्म अलमलिएका कार्यकर्ताहरूमा केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि उत्साह आउने गरी पार्टीले नीति लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ १२, २०७६, १५:३०:००